Ikamelo Elizimele enkabeni ye-Downtown Smithers - I-Airbnb
Ikamelo Elizimele enkabeni ye-Downtown Smithers
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Emma
Leli kamelo elihlanzekile, elikhanyayo liyindawo ekahle kakhulu yokuvakashela kwakho e-Towerley Valley! Itholakala kwenye yezindlu zamagugu zokuqala enkabeni yedolobha lase-Smithers, le ndawo yokuhlala iyimfihlo ngokuphelele enendawo yokungena ehlukile, indawo yokupaka ekhethiwe, nakho konke okudingayo ukuze uzizwe ukhululekile futhi usekhaya.
Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela engemuva kwendlu ivulekela endaweni yokungena enhle enebhentshi, indawo yezicathulo, nendawo yokubeka amajazi. Umnyango ongakwesobunxele uvulekela ekamelweni eliyinhloko nendawo yokuhlala enophahla oluphakeme, umbhede omkhulu ontofontofo, indawo yokudlela isidlo sasekuseni enezihlalo ezimbili netafula, kanye nekhishi elinomshini wokwenza ikhofi, i-hotplate, i-toaster oven, nakho konke okudingayo ukuze ulungiselele ukudla okumnandi e-. Igumbi lokugezela elingu-3 litholakala ngaphesheya kwendawo yokungena ukusuka ekamelweni eliyinhloko, futhi lineshawa engena endlini kanye nomshini omusha wokuwasha izingubo izivakashi ezamukelekile ukuwusebenzisa.
Awukwazi ukuthola okunye okuphakathi kunalokhu! Kutholakala ezinyathelweni ezimbalwa nje ukusuka e-Main Street e-Smithers 'edolobheni lase-Brewery District, jabulela ukuhlola izitolo zekhofi eziseduze, izindawo zokudlela, izindawo zokuphuza ezincane nezitolo zendawo. Ikamelo liphinde libekwe kalula ngokwengxenye ukusuka e-Coast Mountain College, nesibhedlela, izakhiwo zikahulumeni, umtapo wezincwadi nezitolo zokuthenga ukudla konke phakathi nokuhambahamba kwemizuzu engu-5. Futhi uma ukubukwa kwezintaba okuzungezile kukukhathalela ukuzijabulisa, Umfula we-Bushley, indawo ye-Hudson Bay ski, namanethiwekhi emizila eminingi aseduze!
Indlu eyinhloko exhunywe ekamelweni yindawo yethu yokuhlala eyinhloko, ngakho-ke kufanele kube lula ukulandelela uma sisedolobheni:). Sizophinde sibe lula ukubamba i- ngomyalezo ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho, futhi sihlale sikujabulela ukusiza ngokusikisela noma ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongaba nayo mayelana nendawo. Kungakhathaliseki ukuthi sise-Smithers noma cha phakathi nokuhlala kwakho, kuzohlala kunomuntu otholakalayo ukusiza uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo noma izinkinga ngendlu. Sinomuzwa wokuthi le ndawo incane kakhulu ezivakashini ezingu-2 ezihlala isikhathi esingaphezu kwenyanga.
Indlu eyinhloko exhunywe ekamelweni yindawo yethu yokuhlala eyinhloko, ngakho-ke kufanele kube lula ukulandelela uma sisedolobheni:). Sizophinde sibe lula ukubamba i- ngomyalezo ng…